OpenEXPO Inotangisa eBook pane Open Source uye Yemahara Software Maitiro | Linux Vakapindwa muropa
Shamwari dzedu kubva OpenEXPO vatungamira kugadzirwa kweBook pa Vhura Sosi uye Yemahara Software Maitiro. Kune izvi ivo vakave nekubatana kwevashandi vepamusoro-chikamu muchikamu ichi. Iyo eBook mharidzo iwe unogona download zvemahara (Inowanikwa paGoogle Drayivu, saka unogona kuinakidzwa pasina kuikanda), yakaitwa muna Ndira 25 kuMadrid. Pakanga pasina kushaikwa kwemakambani akadai seBBVA, Telefónica, Gasi Natural Fenosa, nezvimwe.
Gwaro iri rine zvidzidzo uye ongororo pamusoro penguva yemberi yeakavhurika matekinoroji uye mhedziso inoratidza izvo yakavhurwa sosi uye yemahara software iri kufamba yemakambani makuru uye emaSMEs. Kubva kuLxA tinotarisira kuti unonakidzwa nerugwaro urwu rwakanaka, uye nekudaro tinogovana nhau dzinonakidza newe
Kuita kuti izvi zvijeke, OpenEXPO yaunganidza maonero e 42 nyanzvi mune ino chikamu ICT matekinoroji, uye kunyanya avo vese vane hukama neyakavhurika sosi software uye yemahara software. Ivo vanga vari mukutungamira kwekupa, mumapeji makumi matanhatu nenomwe, maonero avo akasarudzika enguva pfupi ramangwana reiyo 67, pamusoro pekutora mhedziso dzakatorwa kubva kuongororo pamatanho ekucheka-cheka muyakavhurika matekinoroji chikamu cheichi gore rimwe chete.
Kubva kuLxA isu tinogara tichiedza kudzokorora iyi mhando yenhau dzinouya kwatiri kubva kuOpenEXPO, saka tichafara kuburitsa zvimwe zvinyorwa nezve zvimwe zviitiko yakarongedzwa naOpenEXPO, pamwe nekukuzivisa iwe nezverudzi urwu nhau. Ini ndinogona kungokukorokotedza iwe nezve budiriro iwe yauri kukohwa uye nerutsigiro rwako uye kuzvipira kune iyo nyika yakavhurika-sosi yemahara software, pamwe nekukushuvira iwe kuti uenderere mberi nebasa rako rakanaka.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » OpenEXPO inotangisa eBook pane yakavhurwa sosi uye yemahara software maitiro
GeckoLinux Plasma: kune vekare vhuraSUSE vadikani